माया के हो ? Nepalpatra माया के हो ?
यो फिक्का दुनियाँमा मायाको आभासले गर्दा यो संसार मंगमगाई रहेका छन् । माया शब्द नभएको भए सायद यो संसार फिक्का हुन्थ्यो होला । विभिन्न युगमा विभिन्न विद्वानले मायाको परिभाषा आ-आफ्नो तरिकाले दिएका छन् । जति मायाको परिभाषा बुझ्दै गयो त्यति यो मायाको गहिराइले हामीलाई डुबाउँदै जान्छ । मानिसहरूले भने झै माया नि:स्वार्थ छ भनौ भने माया स्वार्थ पनि भेटेको छु । प्रेममा छलकपट हुँदैन भनौ भने छलकपट गर्नेको लामै लाइन देखेको छु ।
माया ले नै कति को जीवन एकदमै राम्रो बनाई दिएको छ । तर कति को जिन्दगी नै बर्बाद पारी दिएको छ । यतिसम्म कि उनीहरु ले आत्महत्यासम्म गरेका छन् । बिचराहरु माया पाएपछि संसार नै जितेको ठान्छन । तर फेरि यसवाट धोका खाए पछी संसार वाटै हारेको महसुस गर्छन, अनि आफ्नो जिन्दगी नै बर्बाद पर्छन । उनीहरु आफ्नो जिन्दगी त् बर्बाद पर्छन, तर परिवारमा पनि धेरै नि चिन्ता पारी दिन्छन ।
माया प्रेम नै जीवनको पूर्णता हो । तर माया को साथैसाथै घृणा पनि यो जगतको शृष्टिसँगसँगै आएको भावना वा स्वभाव हो । त्यो स्वभाव पनि सबैमा हुन्छ तर घृणा हामीले केवल असत्य र अन्यायलाई मात्रै गर्नुपर्दछ । माया अथवा प्रेम विभिन्न प्रकारका उपमाहरुसँग जोडिन्छ जस्तो संसार अथवा जगतलाई गर्ने माया, जीवनलाई गरिने माया, मानबलाई गरिने माया, नातागोतालाई गरिने माया, आमा बुबालाई गरिने माया, शन्तानलाई गरिने माया इत्यादि ।
माया भनेको भित्र मनदेखि गर्नुपर्दछ । दुईदिन मिठो वोलेर कसैको जीवनमाथि खेलवाड गर्नु भनेको एकदमै पाप हो । माया भनेको पाउनु मात्र माया होइन, गुमाउनु पनि माया हो । जसरी भगवान श्री कृष्णले हिन्दु धर्मका कथाहरूमा राधाको प्रेममा परेर १६ हजार १ सय ७ जनालाई बिहे गरे । तर, उनले चाहेको र माया गरेको राधालाई कहिलै आफ्नो बनाउन सकेनन् । भगवान शिवकै कुरा गर्‍यौ भनेपनि शतिदेवीले शिवको लागि आफ्नो देह त्याग गरिन् ।
शतिदेविको पिताले शिवको बारेमा गरेको आलोचना सहन नसकेर अग्नि कुण्डमा हाम फालेर देह त्याग गरिन् । त्यसपछि भगवान शिव आफ्नी पत्नी शतिदेविको मृत शरीर बोकेर तीनवटै लोक बौलाएर हिँडेको कथा पनि सुनेकै हौ । शेन्ट भ्यालेनटाइनले पनि प्रेमकै निम्ति आफूलाई समर्पण गरेका कारण फेब्रुअरी १४ अर्थात आजै दिन संसारभर भ्यालेनटाइन दिवस अर्थात प्रणय दिवसका रूपमा युवायुवतीले उनलाई सम्झने गरेका छन् ।
‘मुआब्जा देउ, कि जग्गा फुक्का गरिदेऊ’
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ६५ वर्ष पूरा गरी आजदेखि ६६ औँ वर्ष प्रवेश
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चेतावनी : धम्की स्वीकार्य छैन